Tag: Guraceel | Sagal Radio Services
Wasiirka difaaca Gen Diini oo booqday dadkii ka barkacay dagaalada Guriceel
Wasiirka gaashaandhigga Somalia Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini oo ayaa booqday maanta goobaha miyiga ah ee ay ku barakaceen dadkii colaadii degmada Guriceel ee gobolka Galguduud ka cararay.
Ciidamo Jabuutiyaan ah oo gaaray degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud
Ciidamo Jabuutiyaan ah oo qeyb ka ah howl galka AMISOM ayaa gudaha u galay degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, iyadoo ciidamadan ay ka qeyb qaadanayaan sugida amniga degmada.
Heshiis horu-dhac ah oo laga gaaray dagaalkii Guriceel iyo R/Wasaaraha oo ku wajahan Dhuusa Mareeb
Wararka ka imaanaya degmada Dhuusa Mareeb ayaa sheegaya in heshiis horu dhac ah laga gaaray colaadii degmada Guriceel, iyadoo lagu wado in maanta la soo bandhigo qodobadii lagu heshiiyay.
Colaadii degmada Guriceel oo maanta heshiis laga gaarayo
Wararka ka imaanaya degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya inay socdaan kulamo iyo dadaalo la doonayo in lagu soo afjaro Colaadii mudooyinkan ka taagneyd Guriceel, halkaasoo dhowr jeer ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo Ahlusuna.
Daawo Sawirrada: Wafdiga Wasiirka Gaashaandhiga ee maanta gaaray Guriceel
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Gaashaandhiga Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini ayaa maanta gaaray degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud, waxaana soo dhaweeyay masuuliyiinta gobolka Galgaduud, Xildhibaano, Saraakiil iyo odayaal dhaqan.
Deg Deg:- Dagaal ka socda Degmada Gurceel
Wararka ka imaanaya Magaalada Gurceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Saaka uu halkaasi ka qarxay Dagaal u dhexeeya Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Alhusunna.
Gudiga Dhex dhexaadinta Dagaalka Gurceel oo Baaq diray
Iyadoo Gudi iskugu jira Odayaal iyo Siyaasiin ay Degmada Gurceel ee Gobolka Galgaduud ka wadaan Dhex dhexaadin ku aadan sidii loo joojin lahaa Dagaalka u dhexeeya Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Ahlusunna ayaa waxaa ay Baaq u diray Dadkii Shacabka ahaa ee degmada ka barakacay.
Wararkii ugu dambeeyay Xaalada Degmada Guri-ceel kaddib Dagaalkii shalay
Wararka maanta oo Jimco ah naga soo gaaraya degmada Guri-ceel ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in xaaladu degan tahay, inkastoo wali ay jiraan xiisado colaadeed oo u dhaxeeya ciidammada dowladda Soomaaliya iyo xoogagga Ahlu Sunna oo dagaal culus shalay ku dhaxmaray bartamaha degmada.
Dagaal culus oo saaka dib uga qarxay degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud
Dagaal xoogan ayaa mar kale waxaa uu saaka dib uga qarxay degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud, halkaasoo maalin ka hor ay la wareegeen ciidanka Ahlusuna.
FAAHFAAHIN: ku saabsan khasaaraha dagaalkii ka dhacay Degmada Guri-ceel
Ku dhawaad 15 ruux oo ay ka mid yihiin saddex ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyootay tiro kale oo intaa ka badanna way ku dhaawacmeen dagaal culus degmada Guri-ceel ku dhaxmaray ciidammada dowladda iyo garab ka mid ah xoogagga Ahlusunna Waljameeca ee gobollada dhexe.
Ahlusuna oo ku eedeysay dhibaatadii shalay ka dhacday Guriceel Gudoomiyaha Galgaduud
Sarkaal ka tirsan Maamulkii Ahlusuna ee laga saaray degmooyinka Guriceel iyo Dhuusa Mareeb ayaa ku eedeeyay dhibaatadii shalay ka dhalatay dibad baxa ka dhacay Guriceel inuu mas’uul ka ahaa Gudoomiyaha Gobolka Galgaduud.